Ciidan Ka Tirsan AMISOM Oo Howlgabnimo Dalbaday – idalenews.com
Ciidan Ka Tirsan AMISOM Oo Howlgabnimo Dalbaday
Muqdisho(INO)- Ciidamo ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee Somaliya ayaa dalbaday howlgabnimo kadib markii ay muddo dheer ku jireen howlaha Ciidanka sidoo kalena waayeen xuquuqdii ay ku lahaayeen Amisom.
Ciidankan oo ka tirsan Ciidanka Uganda islamarkaana dhawaan dib ugu laabtay dalkooda ayaa intooda badan nay talisyadooda weydiisteen in laga fasaxo howlaha Ciidanka loona ogolaado in ay dib ugu laabtaan reerahooda.
Shalay ayaa waxaa inta badan Ciidan hal guuto ah oo ka laabtay Soomaaliya la siiyay bil fasax ah,waxaana lagu war geliyay in ay bil kadib howsha ku soo laabtaan.
David Muhoozi,oo ah Taliyaha Ciidanka lugta ee Uganda,ayaa Ciidamada u sheegay in haddii ay soo laaban waayaan bil ka dib ay lumin doonaan xuquuqda ay ku leeyihiin Dowladda iyo howlgalka AMISOM.
Taliyaha ayaa waxaa uu sheegay in Ciidanka aan soo laaban bil ka dib ay ciqaab kala kulmi doonaan talisyadooda,sidoo kalena ay weyn doonaan Mushaarka 10 Bil oo ay ka shaqeynayeen Soomaaliya kaas oo aan wali la siin. Mid ka mid ah Ciidanka dalbaday howlgabnimada ayaa sheegay in uu Ciidanka Uganda ku biiray 1986dii ,ka soo shaqeeyay Koofurta Suudaan,Sanad kadibna loo diray Soomaaliya isaga oo laga diiday howlgabnimadiisa.
Uganda waxaa Soomaaliya ka jooga 6,700 oo Askari oo ka mid ah howlgalka Amisom ee Soomaaliya,waxaana guutadiiba ay shaqeysaa Sanad iyada oo lagu beddelo guuto kale.
Sidoo kale Uganda waxaa ay Ciidan ku leedahay howlgalka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya,waxaana ay Ciidankaas ilaaliyaan xarumaha Qaramada Midoobey ee Soomaaliya.
Daawo: Batuullo Sh. Axmed Gaballe: “Ragga boobay kuraasta dumarka hasoo xirtaan Dirac, Garbo-saar, Rajastiin iyo Gorgorad haddii kale”